65 IIBHAFU ZOKUHOMBISA (IMIFANEKISO EMIHLE) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela 65 Iibhafu zokuhombisa (Imifanekiso emihle)
65 Iibhafu zokuhombisa (Imifanekiso emihle)
Le galari ineebhafu zokuhlambela ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Khawufane ucinge ukutyeba kwelinye lamagumbi okuhlambela amahle agqibeleleyo kunye nokuhonjiswa okuphezulu kunye nokuhonjiswa okuhle. Le mifanekiso mihle ibonisa iibhafu ezintle zokuntywila ukukunceda ufumane eyona ikulungeleyo.
Nazi ezinye zeentlobo ezithandwa kakhulu kwiibhafu:
- acrylic - Iibhafu zokuhlambela ze-Acrylic ziza kuluhlu olubanzi lweemilo kunye nobukhulu. Banobunzima, babambe ubushushu kwaye bayanyamezela kukungxengeka kunezinye iintlobo. Nangona kunjalo, zihlala zibiza kakhulu.
- Yenza iPolymer -Izinto zokwenziwa, ipolymer ebunjiweyo ijongeka kakhulu njengelitye lokwenyani elinokufana neoniks okanye igranite.
- Yenziwe ngentsimbi yentsimbi - Inzima, yomelele kwaye yomelele, ityhubhu yentsimbi enokuphinda ithengise ubushushu kakuhle kwaye ibe lukhetho oluqinileyo iminyaka emininzi ephulukana nokuthandwa.
-Intsimbi engenamlinganiso-Ixabiso elingaphantsi kwentsimbi yentsimbi, ityhubhu yensimbi enamacala athambileyo ithambekele ekukhuleni nasekungxoleni ngelixa libaleka amanzi.
-I-fiberglass egalelwe i-Gel -Izoqoqosho kunye nokukhanya okuncinci, ityhubhu ye-fiberglass iyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo.
Imarble eyakhiwe -Ubukhazikhazi bemarble bunokumangalisa xa kubonisiwe kwibhafu. Nangona kunjalo, i-marble inokufuna ukugcinwa okungaphezulu, inokukrwela ngokulula kwaye ixabise kakhulu kunebhafu yokuhlambela isebenzisa izinto zemveli.
Kumfanekiso ongentla, ukulula kuyinto ephambili nakwindlela yangaphakathi yenguqu kunye nesiko. Lo ngumzekelo omhle wesitayela sokuhlambela esincinci. Isebenzisa iskimu sombala okhanyayo nesilula esenziwe mhlophe kunye nezimnyama ukwenza uyilo oluhle. Ibhafu emhlophe ngokuqinisekileyo iba yinkwenkwezi yegumbi lokuhlambela njengoko umzimba wayo omhlophe weceram umi ngokuchasene nomgangatho ongaphantsi wegrey ceramic kwaye ubekwe ngobuchule kanye ecaleni kwefestile.
Le ndlu yokuhlambela yesitayile yotshintsho iya kwisikimu sombala ofudumeleyo, ukudibanisa ukukhanya okukhanyayo nomhlophe ukwenza uyilo oluhle lokuhlambela. Ubekwe kakuhle kwimigangatho ziithayile ezimhlophe zemabhile, ngelixa iindonga zinokudityaniswa kweetayile ezimhlophe zangaphantsi kunye nepeyinti ekhanyayo ye-beige enobumba obumhlophe. Igumbi lokuhlambela linefestile yebhayi apho kukho iifestile ezi-3 zokulungiselela ukubonelela ngokukhanya kunye nembonakalo yegadi entle kwigumbi lokuhlambela. Ibhafu yokuhamba ngokukhululekileyo ibekwe kule ndawo, kunye nesitshixo sokuma ngaphezulu kwayo, ukuyenza indawo ephambili.
Iindonga eziluhlaza eziluhlaza ezisetyenziswe kolu lwakhiwo lokuhlambela ngokuqinisekileyo zinika eli gumbi imvakalelo entsha kunye nepholileyo, kwangoko iyenza ibonakale isencinci kwaye iphilile, ukanti igcina ubuhle obufihlakeleyo. Le ndlu yokuhlambela inkulu kakhulu ngobude obuphezulu besilingi, iyenza ibonakale ibanzi. Ngenxa yombala wodonga, yonke indawo yokuhlambela igcina ilula, isebenzisa iithayile ezimhlophe, iikhabhathi kunye nemabhile emhlophe. Ibhafu ibibekwe kanye ecaleni kwefestile enkulu nasezantsi kwefestile ephezulu, ngoko ke nokuba akukho chandelier, ukukhanya kwendalo okungena ngeefestile ngokuqinisekileyo kuya kuyigxininisa.
Buyela emva ngeli xesha kwisitayile sokuhlambela. Ibhafu entle ezimeleyo enezinto zeqokobhe kwiinyawo zayo zesilivere ibekwe ngeefestile zebay kwaye ijikelezwe ziikholamu ezimbini kwicala ngalinye, kwisiphelo sekhonkrithi eluhlaza. Ukubekwa kwebhafu kunye neefestile kunceda ukuyenza ibe yindawo ekujongwa kuyo kwigumbi lokuhlambela, kwaye iibhloko zeglasi ezisetyenziswe njengeewindows ziyanceda ekukhanyeni ngelixa zigcina ubumfihlo.
Isenokuba ncinane, kodwa le ndlela yokutshintshela yangoku yesitayile sokupaka kunye nobuhle. Isebenzisa iskimu sombala esilula esenziwe ngesilivere kunye nomhlophe, ukongeza imibala eyahlukeneyo yentsimbi kwisithuba sokuziva kwangoku. Kukho udonga olunye oluneepaneli zentsimbi ezingenanto kunye nepaneli ephakathi enesilayidi esiqinileyo samatye, esenza i-medley ebalaseleyo yezixhobo zale mihla nezesintu. Ngokuchasene nendawo engenamsebenzi yentsimbi engenasici yindawo yokuhlambela yesinyithi engenazintsimbi ebekwe embindini weefestile ezimbini ezinkulu. Udonga apho impompo yayiqhotyoshelwe khona lunxitywe ngemabhile, longeza ngakumbi ubume ngaphezulu.
Le yentsomi igumbi lokuhlambela elikhulu lanamhlanje elinamampunge ama-2 amakhulu ngokuchasene nomnye, kunye nebhafu enkulu yokuhlambela embindini wegumbi. Iskimu sombala simhlophe kwaye singwevu, kusetyenziswa iithayile zendlela emhlophe engaphantsi komhlaba, iindonga ezimhlophe, kunye nemigca engwevu yeethayile zodongwe zodonga lwesandi. Ukugxininisa ityhubhu, ikhandlela yeglasi evuthuziweyo ijinga kanye ngentla kwayo, kwaye ecaleni kwayo kukho izitulo ezibini ezenziwe ngomthi kunye nombhoxo omdaka ngombala ukunceda ukongeza indidi encinci kunye nokuthambeka kwisithuba.
Uyilo lwangoku lokuhombisa oluphefumlelweyo lwaseAsia oludibanisa iimilo eziphilayo kunye nemigca ethe tye kunye nolingano ukwenza uyilo olulula kodwa oluhle. Ukugqitywa komdla kwakusetyenziswa eludongeni ngokunjalo, njengeethayile ezimdaka zisetyenziselwa udonga olugobileyo, ilitye lendalo leorenji kolunye udonga, kunye neetayile ze3D kudonga oludiliziweyo kunye neepateni ezijikelezayo. Kulapha apho ibhafu emile okwezintso ibekwe khona, eyenza umboniso ube yindawo efanelekileyo yokubeka iimveliso zebhafu ukuze zonke zifikeleleke.
Igumbi lokuhlambela lale mihla ngokudibanisa imibala eyahlukeneyo yomhlaba kunye noburhabaxa, ukuvelisa imeko yendalo ebuyisiweyo kwigumbi lokuhlambela. Ibhafu yanamhlanje yokuma simahla ihleli phakathi kwento engento kunye nendawo yokuvasa evaliweyo. Imigangatho ye-Beige granite inceda ukongeza ukuziva kwendalo emhlabeni, ngakumbi ukubhangiswa nombhoxo wesikhumba sezilwanyana, ngelixa iithayile zensimbi ezingenasici ezindongeni zivelisa imvakalelo entle kakhulu yanamhlanje.
Ukuqaqambisa ubuhle belitye lendalo elisetyenziswe kule ndawo yokuhlambela, olu luyilo luyakwazi ukusebenzisa ilitye lesepha elingwevu kuyo yonke indawo yokuhlambela ngeendlela ezahlukeneyo nokusika, ukongeza ipateni kunye nokwahluka ngaphandle kokusebenzisa izinto ezifanayo. Izinto eziphathekayo zinokugqitywa kwe-satin ezithambileyo kuyo, ukuvelisa i-sheen efihlakeleyo, ehambelana ngokugqibeleleyo neendonga zokukhanya kokhilimu kunye nebhafu yokuhlambela yentsimbi engenasici ngefestile.
Izinto zanamhlanje kunye ne-glam yeklasikhi kolu lwakhiwo lincinci lokuhlambela. Igumbi lokuhlambela elincinci lineendonga ezingwevu ezikhanyayo kunye ne-ashwood egqiba iithayile zomgangatho we-ceramic ukutshatisa. Indawo yokuhlambela, eyinkwenkwezi yeli gumbi, ibekwe eludongeni ngefestile kwaye inxibe iithayile zemibala emhlophe, emhlophe, yenza ipateni efana nepuzzle eludongeni.
Ngokuqinisekileyo ungaziva ngathi uhlamba indlu yasebukhosini kule ndlu yokuhlambela intle. Indawo ephambili yesithuba sine-cream yedamask lodonga kunye nokugqitywa kweenkuni kumgangatho wethayile. Indawo yokuhlamba kunye nebhafu, kwelinye icala, zidityanisiwe kwindawo eyahlukileyo enesahlulelo seglasi esicacileyo. Njengoko ungena, uyakuba kwindawo yokuhlamba kuqala, kwimvula emhlophe emibini emiswe kwiindonga ezi-2. Ibhafu ibekwe kwiqonga / kumgangatho ongaphezulu kwaye yabekwa eludongeni lwe-aksenti kunye neethayile zesilayiti ezikhanyayo.
Ubuhle kunye nokugqithisa akusoloko kuhamba ngesandla, kwaye lo mzekelo ungqina ukuba indawo ingaba lula kwaye ihle ngexesha elifanayo. Iphefumlelwe uyilo lwe-zen, le ndawo yokuhlambela isebenzisa ulingano, ulungelelwaniso kunye nokusetyenziswa kwemibala yendalo kunye nokukhanya. Kule ndawo yokuhlambela, uya kubona amampunge amabini aneekhabhathi zaseMahogany kunye neplatifiki emhlophe kwicala ngalinye lodonga, kwaye udlula kuvulo olukhulu, uya kufumana ibhafu yokuhombisa eyingqayizivele ebekwe embindini wegumbi, kwaye ujikeleze imigangatho yayo. ngamatye amdaka okongeza ubume kunye nefuthe.
Le ndlu yokuhlambela inovakalelo olukhulu kuyo ngenxa yemibala yayo kwaye igqibile. Indawo inendawo enesisa, kwaye uyilo olungaphezulu kwako konke lugcinwa lwanamhlanje kwaye lulula, kusetyenziswa iindonga ezimhlophe kunye nemigangatho emhlophe yeceramic uninzi. Kukho indawo ehlanjwe ngokupheleleyo yokuhlambela esebenzisa iithayile ezingwevu kunye neethayile zesikali esimnyama kwiindonga zayo, kwaye kukwakho nebhafu yokuhlisela embindini, enee-ceramic tiles ezingwevu ezigubungela ukubiyela kwayo. Yintoni eyenza ibhafu ibonakale ngaphandle kweshawa, ngaphandle kokuyilwa kwayo okulula kunye nokugqitywa, kukusetyenziswa kwekhandlela elibekwe kanye ngaphezulu kwebhafu.
Amagumbi okuhlambela anqabileyo anemigca ecocekileyo kunye nokugqitywa okwangoku ayamema kwaye anomtsalane. Olu luyilo lulula kwaye luthe tye, lubonisa iingcebiso zokuphefumlelwa koyilo lwaseAsia, kudityaniswe noyilo lweshishini. Inentlobo ngeentlobo zokugqitywa, ezinjengeplanga ye-PVC yokuhombisa imigangatho yayo, iithayile zemibala e-turquoise eludongeni lwayo lwasekunene kunye nophahla oluphakathi lwepayini lwendawo yomphunga. Ngaphandle kwemibala emininzi kunye nokugqitywa, igumbi lokuhlambela liyakwazi ukubonakala lihambelana, njengoko iindonga zayo kunye nophahla zigcina umfaniswano omhlophe ugqibe yonke indawo.
Yandisa amava akho okuhlambela njengoko uphumla kolu luhlu lulula lokuhlambela. Ibekwe kwinqanaba le-attic, iindonga ezixhonyiweyo ezinesibane esibhakabhakeni ngokuqinisekileyo zathathwa njengezixabisekileyo. Ukuze usebenzise ngokupheleleyo umbono, ibhafu yaphakanyiswa eqongeni eyayinxitywe ngeethayile ezimnyama zeceramic. Ukulinganisa ukugqitywa komgangatho omnyama, iithayile zeglasi eluhlaza eziluhlaza zazisetyenziswa ezindongeni, zenza ukuqaqamba, ukubonakalisa okugqityiweyo.
Ukuba awunayo imbonakalo yendalo, yangaphandle, ungasoloko usenza enye ngaphakathi. Le ndlu yokuhlambela iyila ngobuchule ngaphandle kokungabikho kombono wangaphandle, kwaye yenza igadi yangaphakathi ecaleni kwebhafu yamatye yokukhohlisa ukuba ibhafu ilungile ecaleni kwegadi. Into eyincedayo ukuba ijongeke iyinto eyomeleleyo yimithi ejikeleze ukuvulwa kwegadi yangaphakathi, iyenza ibonakale njengefestile.
Olunye uyilo lwangoku lwe-zen-ephefumlelweyo ebonisa ubuncinci kodwa uyilo lwangasese oluhle. Inento enkulu enamampunge kunye nokugqitywa okumnyama kweMahogany, ehambelana nomgangatho welitye lomlambo kunye neetayile zentsimbi zentsimbi ebrashiweyo kwiindonga zeshawa. Ukwahlulwa kwebhafu yinto eyahlukileyo kancinci, kuba endaweni yokuyibeka kwindawo ephakanyisiweyo yesakhelo, yabekwa kanye ngaphakathi komgangatho ophambili, ukuyenza eyona ndawo isezantsi / inzulu kwigumbi lokuhlambela.
Ukukhanya okufudumeleyo okuthambileyo kukhanyisa kwizibane ezahlukeneyo zale mihla ezibekwe kule ndawo yokuhlambela. Ukugqitywa okusetyenzisiweyo ziitoni ezishushu, njengeethayile zodongwe zelitye lentlabathi kunye nemigangatho ekhanyayo ye-beige yodongwe, ethi incede ekufuneni nasekuboniseni ukukhanya okufudumeleyo kwezibane. Ibhafu kolu luyilo ibekwe phakathi kwento engenamsebenzi kunye nendawo yokuvasa evaliweyo, kwaye yaqaqanjiswa nesibane sayo esibekwe ngaphezulu kwayo.
Amagumbi okuhlambela anikezela ngeembono ezingaphandle zangaphandle anokudala ukuziva uhlamba ngaphandle. Le bhafu ibonelela ngobuhle bangaphandle kunye nomfanekiso wayo omkhulu weefestile ezenziwe ngokhuni. Indawo ebiyelweyo yethayile ivumela undwendwe ukuba luthathe kwaye luthathe zonke iimbono ezintle zendalo.
Indawo yokuhlambela yesitayile yenguqu kukuzama ukubonakala kweklasikhi / yakudala, kubandakanya ukugqitywa kwegolide yegolide kwizakhiwo zayo zangasese kunye nesilivere egqityiweyo ekukhanyeni kwayo. Ukugqitywa kwegumbi lokuhlambela ngokwalo kubaluleke kakhulu, i-marble basket weave mosaic tile phantsi, kunye nomgaqo ongaphantsi komhlaba omhlophe kwisiqingatha seendonga. Ukongeza isuntswana lobumnandi kwigumbi lokuhlambela ibhafu eneenyawo zegolide, izitulo ezibini ezinesiciko ecaleni kwayo kunye nemikhonto emnyama emnyama efestileni.
Uphahla oluphezulu ngokuqinisekileyo lwalusetyenzisiwe kule yoyilo iphefumlelweyo yakudala. Ngenxa yokuba indawo yokuhlamba ikwigumbi elahlukileyo, ezinye iindonga zangasese zazinxitywe ngephepha lodonga lwepateni. Iphepha lodonga longeza ukubamba okunethezeka kwisithuba, ngokuqinisekileyo esihambelana nesitayile kunye nokuphakama kwento engento kunye nenye ifanitshala ebekwe kule ndawo. Kolu luyilo, ibhafu yokuhlambela, ewe, ibekwe kanye ecaleni kwefestile, ineemfama zokuzimela ngasese.
Ubungangamsha bokwenyani obuqhelekileyo buvela kolu lwakhiwo lokuhlambela lulungele ubukhosi. Ibhafu yokuhlisela ibekwe kwiqonga eliphakamileyo ngasekunene kwefestile kwaye inendawo yomlilo kwelinye icala ukukunceda uhlale ushushu. Kwelinye icala ityhubhu yinto engento eyenziwe ngepoplar eqinileyo, ukuyinika ithoni yendalo eluhlaza. Iindonga kwelinye icala, zongeza ukuziva ubutofotofo kwisithuba njengoko sigqunywe ngephepha lodonga elinombala kwaye sidityaniswe nepoplar cornice.
Ngephalethi efudumeleyo engathathi hlangothi, le ndawo yokuhlambela ibonakala icolile kwaye ikhululekile ngesibheno esihle. Isebenzisa ipeyinti ye-beige ezindongeni zayo kunye neethayile zeemabhile ze-beige kumgangatho wesiqingatha sodonga lwayo. Iikholamu zeFaux zikwanokugqitywa kweemabula zenziwe ngeplastikhi emva kwemathiriyeli yaphantsi ukujonga ngakumbi. Icala elide lodonga kulapho i-Mahogany vanity ibekwe khona, ngelixa ibhafu ibekwe kwikona yegumbi, ngefestile encinci.
Ukudityaniswa kwabamhlophe nabangekho mhlophe kudala oku kuyila okuqaqambileyo kunye nokuhlaziya kuyilo lwesitayile sendawo yangasese. Imigangatho yenziwe ngeethayile zemabhile kwaye itshatisa imiphezulu yeetafile esetyenzisiweyo kwizinto ezingento, ngelixa iindonga zazipeyintwe ngombala ofudumeleyo omhlophe. Iikhabhathi ezingamampunge zipeyintwe ngombala omhlophe ngokunjalo. Indawo yokuhlamba kunye nebhafu yokubhabha zombini zisembindini, kwaye zisebenzisa iithayile ezimhlophe nezimhlophe zesilili kwiindonga zayo. Ibhafu, nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo yindawo ekugxilwe kuyo egumbini njengoko ityibilikisiwe kanye phakathi kwaye kugxininiswa ngakumbi yikristale yekhandlela kanye ngentla kwayo.
Igumbi lokuhlambela eliphefumlelweyo le-neo-classic elinomchukumiso weenkcukacha zangoku ezisebenzisa iphalethi efudumeleyo engathathi hlangothi ukuyila uyilo oluhlaziyiweyo kodwa oluhle. Zonke iindonga zazipeyintwe nge-beige, zimhlophe ubumba kunye neentsika zapeyintwa kukhilimu okhanyayo. Imigangatho yigreyite ye-beige, kwaye iikhabhathi ezinamampunge zikwakhilimu ukuhambelana nokubumba. Ibhafu yokuhlisela ibekwe kwiqonga eliphakanyisiweyo kanye ecaleni kwefestile kwimbono egqibeleleyo yangaphandle.
Uyilo lwangoku lokuhlambela lwaseAsia olubonisa umdlalo kwimigca kwaye ugqibile ukwenza esi sithuba simangalisayo. Izinto ezahlukeneyo kunye neepateni ezisetyenziswa kule ndawo yokuhlambela zenza ukuba zibonakale zinamandla ngakumbi kwaye zinomdla. Imigangatho ephambili isebenzisa iithayile zamatye amnyama, ngelixa iindonga zisebenzisa iithayile zelitye lentlabathi ezinekrimu, kubandakanya ishawa yimigangatho edibanisa iithayile ezimnyama kunye neethayile zekhrim. Elinye icala lokuhlambela linendawo yokuhlambela ebanzi enentloko yeshawa emanzi, kwaye kwelinye icala, ibhafu enamanzi ahleli kwiqonga eliphakanyisiweyo elinebhentshi edibeneyo enomsele kunye nokuhonjiswa kweenkuni. Olunye uphawu olwahlukileyo kule ndawo yokuhlambela yindawo yayo entle eqinileyo.
Olu lolunye uyilo lwegumbi lokuhlambela eliphefumlelweyo elihamba ngombala ococekileyo wokukhanya ongathathi hlangothi wombala wangoku, ococekileyo. Ukuba yinkwenkwezi yegumbi lokuhlambela, ibhafu yokuhlisela ibekwe kanye embindini wegumbi, kwiqonga eliphakanyisiweyo elinxibe igranite enombala okhilimu kunye neentsika ezi-4 kwikona nganye yekona kunye nesitayile sekristal esine-accent. Ukudityaniswa kwezi zinto ngokuqinisekileyo kwenza ukuba ibhafu ibe yindawo ekugxilwe kuyo, kwaye kongeze ukuziva okutofotofo kunye neenkcukacha zayo.
Uyilo lwe-Rococo oluphefumlelweyo lokuhlambela luza kuphuma kunye nokusetyenziswa kwezinto ezintle kunye neenkcukacha. I-travertine eluhlaza yayisetyenziswa kuwo wonke umgangatho kunye neendonga, ukwenza ipateni yendalo kumphezulu. Uya kubona ezinye izinto ezintle ezifana nezipili ezihonjisiweyo, imilenze egangathiweyo yamampunge, kunye neethayile zemibala yeendonga zeshawari. Nokuba ibhafu yinto enkulu njengoko iphakanyiswe eqongeni leplanga eliqinileyo, kwaye ibhafu uqobo lwayo yenziwe kumgaqo oqinileyo wendalo kwaye yaqaqanjiswa ngekhandlela lobhedu.
Uyilo lokuhlambela ludibanisa iinkcukacha zeklasikhi kunye neestestics zale mihla, zenza uyilo olucocekileyo nolulula olunomtsalane wobuhle beklasikhi. Amacala amabini eludongeni anezinto ezinqabileyo ezinekhabhathi yeklasikhi epeyintiweyo ekhrimu ekhanyayo ehambelana nopende wodonga. Imigangatho yenziwe ngegranite emdaka, kwaye embindini ibhafu yokuhlisela ibekwe eqongeni eliphantsi. Ishawa ihlangene nebhafu yokuhlambela kwaye yahlulwe kuphela ngodonga lokwahlulahlula ikhonkrithi ngokuvula kweglasi okucacileyo.
Obu bugcisa bakudala bokuyila izindlu zangasese ziqokelela kunye ubunewunewu, ubuhle kunye nokuzonwabisa. I-chandelier ekhazimlayo yekristale exhonywe eluphahleni lwe-oval seve sele ibeka ubumnandi besithuba, kunye neefestile zebala zeglasi. Iikhabhathi zeenkuni ezimnyama ze-cherry ezinemibala egxunyekwe zibekwe kwiindonga ezimbini, zimhlophe zonke ezinye iindonga zapeyintwa kugolide omthubi otyhidiweyo ukuthelekisa umxholo weklasikhi. Ibhafu yegolide yayibekwa kanye kwindawo enefestile yebhay, ukuyenza ibe yindawo ekugxilwe kuyo kuyo yonke indawo. Iindawo zokuhlambela ezihonjisiweyo zihlala zibekwa ngale ndlela yokwandisa amava abasebenzisi kunye nokwenza indawo emangazayo.
Ukudibanisa iziqwenga zefanitshala zakudala kunye nezinto zangaphakathi zoyilo kudala uyilo olunomdla kunye nolunamandla. Le ndlu yangasese isebenzisa i-marble kuwo wonke umgangatho kunye neendonga, kunye nokudlala kwiimpawu ngokufaka i-niches kunye nokukhanyisa ukukhanya. Ngapha kwegumbi uyakufumana izitulo zakudala kunye neetafile ezisecaleni, ukunika ubuntu ngakumbi. Ibhafu yokuhlamba ezimeleyo ibekwe kwiqonga eliphantsi kwaye ibekwe ecaleni kwefestile enkulu yemifanekiso, ikunika umbono wegadi.
Olunye uyilo lwendlu yangasese olusebenzayo olusebenzisa iphalethi engathathi hlangothi. Oku ikakhulu kwenziwa ngokudityaniswa kwabamhlophe kunye nokukhanya okungwevu kunye nokuthungwa kancinci. Kulo mzekelo, imigangatho kunye neendonga zenziwe ngwevu c = iithayile ze-porcelain, ngelixa iikhabhathi zonke zilaminishwe ngombala omhlophe. Iifestile ezinkulu zokuphakama kwesilingi zibonelela ngokukhanya kwendalo okuhle, okonwatyiswe kakhulu xa usebenzisa ibhafu yokubhabha ezimeleyo ebekwe ecaleni kwayo.
Uyilo oluphefumlelweyo lwe-baroque olunzima kwiinkcukacha kunye neepateni kwaye luhamba ngombala omnyama, ocacileyo wombala wokutshatisa umxholo weBaroque. Eyona patheni inomdla kolu luyilo isetyenziselwa kumgangatho wayo - iithayile zepateni yomgangatho kunye nomdumba okrwitshiweyo ngombala omthubi namthubi. Olunye ugqibe olunomdla ziithayile zodonga ezisetyenziselwa ngaphakathi nangaphandle kwendawo yokuhlamba, eziziitayile zeceramic ezenza iphatheni yedayimani yokutsala umphumo we-3D. Kukho amampunge amabini kwiindonga ezichaseneyo ezilungiswe ngee-granite counters kunye neekhabhathi ezimnyama zomthi we-cherry ezihambelana nokugqitywa kwebhedu ye-antique yebhafu embindini wegumbi.
Uyilo lwesitayile soguqulelo lokuhlambela ludlula iinkcukacha ezingeyomfuneko kunye neempawu ezenzelwe ukucoceka kunye nokujonga okujongeka kwindawo. Uya kubona ukuba indawo ayinanto, kwaye iqulathe ibhafu elula yokungena kwiqonga eliphantsi eligutyungelwe lilitye lesepha, kunye nendawo yokuhlala enesihlalo sokuphumla kunye neetafile zesitayile. Ngaphandle kwebhafu, sisipili esikhulu, kwaye ejongene nolo donga yiTV enkulu exhonywe eludongeni eyenza ukungabikho kwefestile.
Le ndlu yokuhlambela incinci kodwa ayiweli kubuhle kunye nokunethezeka. Ukuya kwiskimu esilula esimhlophe nengwevu, olu loyilo lwendlu yangasese luya kudibanisa nasiphi na isitayile sangaphakathi kunye neendlela. Umgangatho wegumbi lokuhlambela lonke ziitayile zemarmore emhlophe ezinamacala amathandathu, ukumatsha kwetheyibhile yemarble yelize. Indawo yokuhlambela ivalwe ngezahlulo ezicacileyo zeglasi, ngelixa ibhafu elula yokuhombisa ibekwe kanye ecaleni kwefestile ejingayo ngombono omnandi kunye nohlaziyo.
Uyilo lwangoku lokuhlambela ngeenkcukacha ezicocekileyo nezilula ezidala ukubukeka okuguqukayo kunye nokungaphelelwa lixesha. Imigangatho ilungiswe ngelitye elikhaphukhaphu elingwevu, elihambelana nelitye lesepha elingaphantsi kwendlela elisetyenziswa kwisiqingatha seendonga kunye neendonga zommandla weshawari, kwaye ezinye iindonga zipeyintwe ngombala omdaka we-mocha. Indawo yokuhlambela ilungiswe ngezahlulelo zeglasi ezicacileyo, ngelixa ityhubhu ezimeleyo ithatha indawo yepremiyamu ecaleni kweefestile zefestile, inika umbono omuhle ngaphandle.
Ukungabikho kwendawo akusoloko kuthetha ukungabikho kwesitayela, kwaye le ndawo yokuhlambela ngumzekelo omhle onjalo. Ngaphandle kwendawo encinci, indibaniselwano yokugqitywa kwezinto kunye nezinto ezisetyenzisiweyo kweli gumbi kudala uyilo olumangalisayo. Imigangatho zizodwa iithayile zeceramic ezingwevu, ngelixa iindonga zazigcinwa zimhlophe. Ngenxa yesithuba esilinganiselweyo, ukukhohlisa kwendawo kuyafuneka, ke udonga lwento engento lwalugqitywe ngokupheleleyo ngezibuko kwaye lufihle iingcango zekhabinethi ezivalwe kwizipili zoloyiko lwendawo engapheliyo. Amampunge asebenzisa i-resin sinks emnyama, kwaye idibene nezinto zokubala ezimnyama kunye neekhabhathi ezimnyama zelnut. Ibhafu ibekwa ngokwendalo ecaleni kwefestile yomfanekiso, kwaye ngelixa oku kubekwa kungafani nolu luyilo, uyilo lwebhafu yokuhombisa yonke into emnyama lolunye uhlobo.
Indawo yangaphakathi yokuhamba ngezinyuko
Uyilo lokuhlambela lubonisa indlela ulingano, ukulinganisela kunye nokulula kunokwenza uyilo olumangalisayo kunye nelinokuhlanjwa ngaphandle kokugqitywa okuhle kunye neenkcukacha. Imigangatho kunye neendonga zisebenzisa nje ilitye lendalo elineetoni eziluhlaza xa kugqityiwe ukubonakala kwesematte, ngelixa iindonga zalo zambathiswe ngomthi weti teak. Embindini wegumbi lokuhlambela liqonga eliphantsi eliphakanyiswe kwilitye eliluhlaza, apho ibhafu ezimeleyo imi kuyo, iyenza indawo ephambili. Ngaphandle kokulula kweenkcukacha zayo, le ndlela yoyilo yokuhlambela isakwazi ukubonakala inomtsalane kwaye iqulethe zonke izinto eziyimfuneko kuyilo lokuhlambela.
Uyilo oluphefumlelweyo lwekhabhathi lunepateni ebonakalayo ethe tyaba kuyo yonke indawo, ngenxa yokusetyenziswa kweepaneli zomthi ethe tyaba kuzo zonke iindonga nophahla lwayo. Ipateni eqhubekayo inceda ekubonakaliseni ukolula indawo, iyenze ibonakale inkulu kunokuba injalo. Izinto ezizodwa zale ndawo yokuhlambela ibiya kuba ibhafu yayo enomgangatho wamatye omlambo kunye nokwahlula ngomthi kunye nesiseko somthi esime ngokukodwa apho ibhafu ezimeleyo ime khona.
Ukusekwa kwendawo yangasese yeMeditera yangoku eneendlela ezilula kakhulu. Idityaniswe kwigumbi elinendawo evulekileyo yokuvula, kunye nokugqitywa okulula okuqulunqwe ngepeyinti kunye neetiles zeceramic ezimnyama namhlophe. Ibhafu emnyama ezimeleyo ibekwe kwiqonga eliphantsi, ngasefestileni nakwindawo yokubasa yombane, ikunikeza kungekuphela nje ngebhafu entle nefudumeleyo, kodwa nembono yegadi ephumlayo.
Uyilo lweli gumbi lokuhlambela lisebenzisa iintlobo ezimbalwa zokugqitywa, kodwa okwangoku luyakwazi ukwenza uyilo olumangalisayo, ngoncedo lwezibane ezenziweyo. Imigangatho kunye neendonga zonke zigutyungelwe ngethayile emnyama emnyama kwisakhelo sebhondi esisebenzayo. Kukho isitayile esincinci se-cantilever isitayile esingenamsebenzi esenziwe ngeekota ezimhlophe kunye nesipili esilinganayo esingaphantsi kwesakhelo. Kukho indawo enkulu yeshawari, ebiyelwe ngokupheleleyo ngezahlulelo zeglasi ezingenasiseko kunye nebhentshi yomthi eqinileyo, kwaye kanye ecaleni kwendawo yokuhlambela ibhafu yokuhlambela elula emxinwa ekufutshane nomnyango wokungena.
Le ndlu yangasese iqhagamshelwe ngokuthe ngqo kwigunjana elikhulu lokuhamba elinobude obugcweleyo be-Mahogany elaminethiweyo. Uyilo lwala maxesha lokuhlambela lubekwe ngokufanelekileyo kuyilo lwala maxesha kunye neefestile ezigcweleyo ezigcwele ukubonelela ngemibono yolwandle. Ibhafu yokuhlambela ezimeleyo iyayonwabela le mbono njengoko ibekwe kanye ecaleni kwefestile enkulu. Ukugqitywa kwezinto zangaphakathi kwenziwa ikakhulu ngomthi - imigangatho eqinileyo yomthi kunye neepaneli zomthi eziyilwe ngobunjineli, zinika indawo imvakalelo efudumeleyo yokuziva ucocekile, ngaphandle kwezi silhouettes zangoku.
Le ndlu yokuhlambela inomxube olungileyo weepateni kunye noburhabaxa, kunye nokukhanya okukuko, ukudala uyilo lwangoku olunamandla kwaye olunomdla. Iithayile zelitye lesepha kwimigangatho zabekwa zaza zadala ipateni yedayimani, ebonisa ukwakheka kwedayimane ye-3D yeengcango zekhabhathi ezingenanto. Kuba uninzi lwamaqhekeza, kubandakanya ibhafu kunye neesinki zimhlophe zonke, iindonga zagqitywa kwiglasi emnyama epeyintwe ngasemva ukwenza umahluko omangalisayo ngokuchasene nale mibala mibini. Ukuqala kwegumbi lokuhlambela, ebhafini, ibekwe kwiqonga eliphantsi kwaye kugxininiswe ngakumbi ludonga lwe-aksenti kunye nophahla lwentetho olusezantsi.
Eli gumbi lokuhlambela lala maxesha alikhangeleki liqaqambile kwaye lihlaziya, kodwa likwahlukile, kuba linomgangatho wemezzanine ukukhulisa uphahla oluphezulu lwendawo. Iithayile ezimnyama zazisetyenziswa kuwo wonke umgangatho wendawo, kwaye ezinye zeendonga kwishawari zisebenzisa iithayile ezimnyama ezifakwe imibala, kodwa icandelo eliphakathi lomgangatho lisebenzisa iithayile ezinomfanekiso onxantathu kwimarble ukwenza indawo yombhoxo yokuncedisa ukugxininisa ibhafu yokuhombisa eqinileyo.
Uyilo oluhlaziyayo lokuhlambela lukhangeleka luqaqambile kwaye lonwabile, kwaye inezinto ezifanelekileyo kwindawo efanelekileyo yokuthambisa ekhaya. Umgangatho wegumbi lokuhlambela lonke wenziwe ngamatye amancinci amancinci kwikhonkrithi etyiweyo, ngelixa iindonga ziyindibaniselwano yeethayile ezimhlophe zeceramic, kunye neetayile ezincinci eziluhlaza ukutshatisa into yokuhombisa kwisitulo sokuphumla. Ibhafu ibhafu engaqhelekanga, kwaye inyanzelekile ukuba iphume echibini lecala elinamachibi, elenza indawo ebanzi. Amagumbi okuhlambela anqabileyo anokuphinda abe namava afana ne-spa aya kuhlala efuneka kakhulu.
Uyilo oluhle akusoloko kufuneka lulayishwe ngezinto kunye neenkcukacha, kunokuba lula njengokuyila igumbi lokuhlambela. Ukudibanisa izinto ezimbalwa kunye nemibala yomxube olungileyo weendidi kunye nezinto ezenziwayo kunokunceda ukwenza uyilo olumangalisayo lokuhlambela. Lo mzekelo udibanisa ukutyibilika komthi kunye neendidi ezimbini zeetiles zodongwe eludongeni. Ezi zimbini zigqityiweyo zinceda ukwenza ibhafu yokubhola ekhethekileyo ime ngaphandle kwaye ibe yindawo ekugxilwe kuyo kwigumbi.
Olu lolunye uyilo lwangasese olucocekileyo nolwanamhlanje olubonisa indlela ukhetho olufanelekileyo lwemibala kunye nokugqitywa okunokuwenza ngayo igumbi likhangeleke lihle kwaye liphucukile ngaphandle kokuhamba ngaphezulu. Igumbi lokuhlambela elibanzi linendawo yangasese evaliweyo eneeglasi ezinamaqhekeza eglasi, kunye neesahlulo seglasi esicocekileyo sendawo yayo enkulu yokuhlamba. Phakathi kwendlu yangasese kunye neeshawari yindawo yokumisa yasimahla ebekwe ngasefestileni, ukonwabela ukukhanya kwendalo kunye nembonakalo yangaphandle. Ukukhanya kweenkuni ze-beige ukugqiba iithayile zeceramic kunceda ukongeza ukufudumala okungacacanga kwisithuba, ngelixa indawo ye-cantilever engelutho eyenziwe ngomthi oqinileyo wepine kunye nezinto zokubala ze-quartz ezingwevu kunye nezipili ezinobungakanani obugcweleyo buqhubela phambili ukujonga indawo.
Uyilo lothando lwe-Rococo oluphefumlelweyo lokudibanisa oludibanisa i-pastel turquoise ethambileyo kunye nekhrimu elula, ukwenza imvakalelo ethambileyo nehlaziyayo yale ndawo yokuhlambela. Ukubumba okudala kunye neembumba zeqokobhe zonke zipeyintwe ngombala omhlophe, ngokuchaseneyo ngokuchaneka kweendonga ezipeyintiweyo eziluhlaza, ngelixa iithayile ezibengezelayo zegranite zongeza ukubonakala kobuhle kwisithuba. Iikhabhathi ezakhelweyo kunye nokugcinwa kwazo zonke zipeyintwe ngombala okhanyayo okhanyayo, ofanisa isiseko sebhafu kunye nombala omhlophe kunye nokhrimu wokhutshwa kweemabhile.
Ukulula koku kuyilo lwegumbi lokuhlambela kubaluleke ngakumbi kwinto ekhangeleka ukuba ikhangeleke ngakumbi. Imigangatho yeenkuni e-Ash kunye ne-laminates ehambelanayo kwiidrowa kunye neendonga ezimhlophe ezimhlophe kunye nophahla zizinto ezigqityiweyo ezifumaneka kwisithuba, kwaye ke umbono omuhle wedolophu yasebusuku ovela kwiindonga ezimbini zamakhethini ngaphezulu kokungabikho kobunkunkqele kuyilo.
Igumbi lokuhlambela eliphefumlelweyo elidibanisa yonke imibala yetoni efudumeleyo ukwenza uyilo olwahlukileyo lokuhlambela. Iindonga kunye nophahla zingafunyanwa kunye neentsika zomthi wepayini eziqinileyo ezivelisiweyo kunye nemiqadi, ukudala ukuziva okuluhlaza, okomileyo kwindawo. Iindonga zipeyintwe nge-sienna brown, ngelixa imigangatho isebenzisa iithayile zelitye elimthubi zegolide. Ibhafu ebekwe ngefestile yinto ebonakalayo kuyo njengoko yenziwe ngobhedu ngezinto ezilinganayo kwaye ibekwe kwiqonga lomthi eliphantsi.
Le ndlu yokuhlambela yobukhosi ngokuqinisekileyo iya kukwenza uzive ngathi uyinkosi kunye nokukhetha kwayo okuhle kwemibala efudumeleyo nepholileyo, kunye nesimbo sayo esihle. Uza kubona iikholamu ezimbini ezinkulu ze-faux ezinokugqitywa okumhlophe okomntwana ohlaza okwesibhakabhaka, ohambelana neendonga eziluhlaza eziluhlaza. Kumgangatho waphantsi, isebenzisa iithayile zelitye lentlabathi ukunika indawo ukukhanya okufudumeleyo Embindini wegumbi kukho into engento yentsimbi, kwaye phambi kwayo naphakathi kweentsika ezimbini kukho ibhafu ye-ceramic ezimeleyo enemilenze evathisiweyo. Isilingi sisebenzisa ubuchule bokupeyinta i-trompe l'oeil yakudala ukwenza isibhakabhaka esingaphakathi endlwini, ukwenzela ukuphumla ngakumbi.
Uhlobo lwendlu yangasese enesitayile sotshintsho esiya kwindibaniselwano yakudala emhlophe, isilivere kunye grey, ukwenza uyilo olungenasiphelo elinomtsalane kwigumbi lokuhlambela. Imigangatho igutyungelwe ngeethayile zerabhile zemabhile, ngelixa isiqingatha seendonga, kunye nodonga lwendawo yonke yeshawari zigutyungelwe ziithayile zangaphantsi ezimhlophe ezimnyama, ezenza umahluko ngobuqhetseba kwiindonga ezingwevu. Izibini zezinto ezingelutho ziphefumlelwe ukuvuna, kunye nemilenze yensimbi yesilivere, ukubhobhoza okubonakalayo kunye ne-countertop eqinile. Ibhafu ibekwa ekupheleni kwegumbi lokuhlambela, kanye ecaleni kwefestile encinci yokubonisa ukujonga kakuhle igadi.
Olu lolunye uyilo lwenguqu lokuhlambela, kwaye inokudibana okugqibeleleyo kweethoni ezifudumeleyo nezipholileyo, kunye neenaliti ezifihlakeleyo zeepateni. Uya kubona ukuba iindonga zisebenzisa iphepha lodonga eliluhlaza okwesibhakabhaka kunye neepateni ezintsonkothileyo, kwaye amalengalenga aluhlaza aluhlaza ahambelana kakuhle nephepha lodonga. Amampunge amakhulu kwelinye icala, agqityiwe ngombala okhanyayo we-beige, ongeze ithoni eshushu kwindawo. Njengoko igumbi lineefestile ezinkulu ezivulekileyo kwigadi engasemva, ibhafu yokuzimela ibekwe kanye ecaleni kwezi windows ukukunceda ukonwabele ukujonga ngelixa uphumle ebhafini.
Uyilo lokuhlambela iMeditera lunobume obujikeleze isetyhula, obenza phantse zonke iziqwenga ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela elungiselelwe ubungakanani bendawo. Iidesika / iikhawuntari zilandela ukumila kweendonga kwaye zigqityiwe ngombala okhanyayo okhanyayo ukutshatisa iindonga, ngelixa ibhafu ibekwe kanye embindini wegumbi. Ibhafu nayo ijikeleze inxibelelene ngqo nokwahlulahlula iglasi kwindawo yeshawa enamacala amabini avulekileyo. Kuba ishawa yeyona ibekwe ecaleni kwefestile, inembono entle yolwandle.
Le ndlu yangasese ibonisa umahluko ocacileyo phakathi kokugqitywa ngokugudileyo kunye nokurhabaxa. Uya kufumanisa ukuba imigangatho yenziwe ngamatye asikiweyo, enika ukujonga okurhabaxa. Ngeli xesha iindonga, kunye nokunye ukulungiswa kunye neziqwenga zefanitshala zigqitywe ngokugqibeleleyo ukuya kwimfezeko. Indibaniselwano yetyhubhu egudileyo yodongwe kunye nophahla olurhabaxa ludala imvakalelo ye-rustic kule ndawo yokuhlambela ilula, kwaye iphinda iphuculwe kukukhanya okufudumeleyo okuvela kwizikhuselo zodonga kunye neekhandlela.
Ngaphandle kokuncipha, olu luyilo lwendlu yangasese lusebenzisa ngokufanelekileyo indawo yolwakhiwo olufanelekileyo nolusebenzayo, olungekho mfutshane kwisitayile kunye nobuhle. Iithayile zemabhile zeHeringbone zisetyenziswa phantsi, ngelixa iindonga zipeyintwe ngombala okhanyayo, kongeza umahluko ngokuchaseneyo nekhabhathi emhlophe. I-Symmetry yayisenziwa kolu luyilo, njengoko uya kufumana izinto ezifanayo ezingento kwaye ubonise iishelufa kwiindonga ezichaseneyo zesithuba. Le bhalansi inceda ukwenza ibhafu elula emile yebhontshisi ime ngaphandle kwaye ibe yindawo ekugxilwe kuyo yesithuba.
Umbono oqinisekileyo wolwandle-lwaselwandle ngokuqinisekileyo usetyenziswa kakuhle kolu loyilo lwendlu yangasese. Uya kubona ukuba indawo yokuhlambela ibekwe kwiqonga eliphezulu ukuze ukwazi ukonwabela olona luvo lulungileyo lolwandle kwiifestile zebheyi. Ukubekwa kwindawo ephezulu yebhafu, kunye nemabhile emhlophe esetyenzisiweyo kwibhodi yayo eyahlukileyo kwimifanekiso ebomvu ebomvu, kwanele ukuzisa amehlo akho kwindawo yetyhubhu kwaye uyenze indawo ekugxilwe kuyo kuyo yonke indawo.
Ukongeza i-glam yoMbindi Mpuma-mpuma kulwakhiwo lokuhlambela ziithayile zegolide ezintle ezineepateni zejiyometri ezisetyenziswa phantsi nasemadongeni. Oku kwangoko kongeze uvakalelo oluhle ngakumbi kuyilo olulula lokuhlambela. Embindini wegumbi ibhafu yokuhamba ezimeleyo enesimo esikhethekileyo, eqiniswe ngakumbi sisandi sangoku.
Le ndawo ibhafu encinci iyonwabela indawo yabucala ethambileyo, njengoko ibekwe kwindawo evaliweyo. Ukulwa imvakalelo ye-claustrophobia, isipili esikhulu sabekwa eludongeni ecaleni kwebhafu. Nantsi ke nefestile encinci yecasement ekupheleni kwebhafu, kunye nomnyango waseFrance, unceda ukubonelela ngokukhanya kwendalo kwisithuba. Xa ufuna ubumfihlo, iimfama ezirholayo zivumela ukukhanya ukuba kungene, ngelixa ugcina ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela labucala.
Le ndlu yangasese iphefumlelweyo ye-gothic iphelele malunga neenkcukacha kunye neepateni. Imigangatho ixakekile ziithayile ezimnyama zemhlophe ezimnyama zebhasikidi, kunye nophahla luxakekile kunye nepateni ephefumlelweyo ye-trellis, iirosisi zelingi kunye nee-cornices ezintsonkothileyo. Ukunceda ukulungelelanisa imigangatho exakekileyo kunye nophahla, iindonga zigcinwa zicacile, kunye nekhabhathi. Iikhabhathi zonke zimhlophe, kubandakanya ukubekwa kwendawo yokuhlambela, kwaye ikwasebenzisa imarble emhlophe ukuthelekisa imigangatho kunye nekhawuntari yamampunge. Ukongeza isuntswana le-spunk zizigqubuthelo zomqamelo zeebhentshi zefestile, ukunika igumbi ukubethelwa kombala ngaphandle kokuthatha lonke ingqalelo kude kwezinye iinkcukacha ezibalulekileyo zesithuba.
Indibaniselwano yokugqitywa kwendalo kunye nokwenziwa kwayo kwenza le ndawo yokuhlambela i-rustic ibe yinto efanelekileyo kuyo nayiphi na umqolomba womntu. Iindonga ze-Beige zidityaniswe nomgangatho wamatye enkwali kunye neetayile zesilayidi ezinombala ophezulu kwiindonga ezigxininisayo. Oku kugqitywa kwendalo kudityaniswe nekhabhathi ye-wengue e-polished ngokugqibeleleyo, kunye neziqwenga zefanitshala ezilinganayo ezifana ne-ottoman eyenziwe ngofele kunye nosihlalo we-humpback. Igumbi lokuhlambela livula nendawo yepatio kunye negadi, ekonyusa ukuziva kwayo kwendalo, kwaye ibhafu yokugqibela yobhedu iyayonwabela le mbono intle ngokunjalo.
Uhlobo lokuhlambela olunothando ngesimbo esimhlophe kakhulu nesimhlophe kunye nombala ophefumlelweyo ophefumlelweyo. Imigangatho igutyungelwe ngeethayile ezimenyezelayo zemabhile kunye neethayile zem herringbone mosaic, ngelixa iindonga ziyindibaniselwano yeetayile ezimhlophe zangaphantsi ezimhlophe kunye nepeyinti ekhanyayo engwevu. Ibhafu ibekwa kwindawo yefestile ye-bay, kwaye ikwabonelelwa ngokukhanya okufudumeleyo nge-chandelier elula yokuxhoma exhonywe kanye ngentla kwayo.
Uyilo olukhulu lokuhlambela luqhagamshelene ngokuthe ngqo kwigumbi lokuhlala labucala kwigumbi. Isithuba sikhulu ngokwaneleyo, kwaye sisebenzisa iithayile zekhrimite ekhanyayo emigangatho yokongeza ukukhanya okufudumeleyo kwindawo. Ibhafu yesiko ejikelezileyo ngokuqinisekileyo ithatha indawo ekugxilwe kuyo, njengoko ibekwe kanye ecaleni kwefestile yomfanekiso kunye nendawo yomlilo ebanzi, kunye nodonga lwesitayile semabhile, ukukunceda ufudumale ngelixa uhlamba.
Iindawo zokuhlambela ezihonjisiweyo kufuneka ukuba zibaleke ziyinyani okwexeshana. Le ndlu yokuhlambela ngokuqinisekileyo ikusa kwenye indawo ngobuhle bayo obukhazimlayo, njengoko igranite enemibala evusayo isetyenziswa ngokukhululekileyo ezindongeni nasekubhityweni kwesilingi nakwiikholamu. Igumbi lokuhlambela lincinci kakhulu, ke ukunceda ukuphucula ukubonakala kwesithuba, kwakusetyenziswa izibuko ezinkulu kwindawo yokuhlambela kunye nodonga olupheleleyo kanye ngasemva kwento engento, ukwenza inkohliso yendawo enkulu. Izinto ezigqityiweyo zegolide zisetyenziswe kuwo wonke umhlaba ukunceda ukutshatisa umxholo ophefumlelweyo we-rococo yoyilo.
Iindawo zokuhlambela ezihonjisiweyo nezigidi zeedola zezona ziphezulu kukuzonwabisa. Le bhafu inika umbono omangalisayo wolwandle lwaselwandle ngelixa ungene kwindawo entle. Ngeendonga zabucala kunye ne-vista yabucala le bhafu inika indawo yokuphumla yokuphumla ukonwabela ukubonwa kwesigidi seedola. Ngomnyango weglasi okufuphi umntu unokuphuma kwiglasi yokubhukuda ecwebezelayo ecwengileyo ukuze angene kule bhafu.
Igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlala onokulithanda:
Amagumbi okuhlambela aneClaw Foot Tub - Iingcamango zoyilo lwegumbi lokuhlambela - Uyikhetha njani iBhafu - Amagumbi okuhlambela amahle amhlophe - Imifanekiso yeShower Luxury
Isicwangciso seNdlu yaseFlorida (amagumbi okulala ayi-4 kunye namagumbi okuhlambela ayi-4)
Iindlela ezi-7 ezilula zokuziva uqinisekile ngelixa ubeka uMtshato kunye neMifanekiso yoBume boMtshato
UJarret Stoll Ocetyiswayo ku-Erin Andrews kwiDisneyland: Fumana Iinkcukacha zothando!
Amakhadi eeSuku zeValentine eziHilarious onokuzithenga ngoku
Izinto ezingama-20 zokujonga kwisivumelwano sakho sokufota
Ngaba ungahlulahlula iindleko zeringi yakho yokuzibandakanya? Abafazi Bokwenene Balinganisa
Ingqokelela yeholide kaHarry Potter Barn 'eHarry Potter' iya kongeza uMlingo kwiRegistry yakho
Izimvo zebar yasekhaya kuhlahlo-lwabiwo mali
I-single vs Double Kitchen Sink (i-Pros & Cons)
Isiqithi seBeardboard Isiqithi (Iingcamango zoyilo)
Indlela yokulinganisa iSofa (Isikhokelo soYilo lwangaphakathi)
UPeta Murgatroyd kunye noMaks Chmerkovskiy babhiyozela isikhumbuzo sokuzibandakanya: Iinkcukacha zomtshato ezizayo
U-Eva Mendes Uphendule ngokuThuleyo kwiNtetho yeGolide yeGlobal kaRyan Gosling
I-Duke kunye neDuchess yaseSussex Ndwendwela iMorocco
Ubunzulu bekhabhathi yekhabethe
Ndiyazi into enye ukuba ndiyakuthanda ingoma
Umxholo wegumbi laseParis
oko cwaka ngonaphakade
Imisesane yomtshato ihamba kweliphi icala
ndimthini umfazi wam ngekrisimesi
U-Evan Rachel Wood ubandakanyeke ku-Zach Villa: Jonga iRing yakhe yokuzibandakanya
Ikhitshi Phantsi kwesibane seKhabhinethi (Isikhokelo soYilo)
I-'Harry Potter 'ephefumlelweyo yoMlambo ohamba ngenqanawa ulapha ke iiNkqubo zakho zeHoneymoon zibhalisiwe